sosegado : October 2012
ယုံလား မယုံဘူးလား အမေရိကန်များ နှင့် Mystery Spots
ဆာရစ်ချပ်ဘရန်ဆန် ကပြောသည်၊ အမေရိကန်တွေဟာ ရယ်စရာကောင်းသည်တဲ့၊ ဒါကို ရောဘတ်ဆန် ကပြန်ပြောပါသည် အမေရိကန်တွေက fun ကိုသိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ funny ဖြစ်နေတာလို့ ဆိုပါသည်။
ကျနော် အထင်ကတော့ လူသဘာဝအတိုင်း funnyဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ funnyမဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်တို့ ရှိပါလိမ့်မည်၊ အမေရိကန်တွေ funny ဖြစ်မဖြစ် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်တွင် သူတို့မေးသော မေးခွန်းတစ်ချို့ကို ကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တွင် အလွန်ခင်မင်သော အမေရိကန်မိတ်ဆွေ နှစ်ဦးရှိပါသည်၊ တစ်ယောက်က Bill ဘေးလ်လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၅၀ ကျော် လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ပါ၊ တစ်ယောက်ကတော့ Jan ယန်လို့ခေါ်တဲ့ အသက် ၃၀ ကျော် လေတပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အရပ်ဘက်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ၊ ဒီလူနှစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်၍၎င်း၊ ကျနော်ရောက်သွားသော နေရာတစ်ခုနဲ့၎င်း ကျနော်အတွက် အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
အမေရိကန်တွေက ပျော်ရွှင်မှုကို ကြိုက်သည် ဆိုရာ၌ တစ်ချို့က ပျော်စရာကောင်းသော၊ တစ်ချို့က သည်းထိတ်ဖွယ်ကောင်းသော၊ တစ်ချို့က လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အရာများကို နှစ်သက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊ ဒီအတွက် လူတို့၏ အကြိုက်ကို လိုက်သော ဈေးကွက်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်၊ ရုပ်ရှင် တီဗီနှင့် ဖျော်ဖြေရေးများတွင် ထိုအစီအစဉ်များ ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။
လေတပ်ဝန်ထမ်း မိတ်ဆွေ ယန်က သူ့ နေ့အားရက်တွင် ကျနော်ကို အလွန် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော နေရာတစ်ခုကို ခေါ်သွားမည်ဟု ဆိုလာသည်၊ မင်း သင်ခဲ့ဘူးတဲ့ ရူပဗေဒ၊ ဘူမိဗေဒနှင့် မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် သီအိုရီတွေဟာ မှားနေကြောင်း မင်းသိလာရလိမ့်မယ်၊ သိပ္ပံပညာဟာ အရာအားလုံးထိ မပြည့်စုံသေးဘူး ဆိုတာကို မင်းသိရလိမ့်မယ်ဟု ဆိုသည်၊ ကျနော်လည်း သိပ်စိတ်ဝင်စားပါတယ် အဲဒီနေရာကို ရောက်ဖူးချင်ပါသည်လို့ ဆိုလိုက်သည်၊ သူ ကျနော်ကို လိုက်ပို့မည့် နေရာကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Santa Cruz မှာရှိတဲ့၊ Mystery Spot လို့ခေါ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော နေရာ ဖြစ်ပါသည်၊ အလုပ်များနေသည့် အတွက် သူလိုက်ပို့မည့် နေရာကို ကျနော်သည် ကြိုတင်လေ့လာမှုများ မပြုလုပ်ခဲ့ပါ၊ သူ့နောက်လိုက်မှာပဲလေ ဆိုပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့ နေခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက် သူ့ကားလေးနဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့သည်၊ San Francisco ကနေ သိပ်မသွားရပါ၊ ကျနော်တို့သည် San Jose ဘက်ကို မသွားပဲ Santa Cruz ဘက် ဆင်းလာခဲ့သည်၊ လမ်းတွင် ယန်က ကျနော်အား မေးလာသည် ‘မင်း ကမ္ဘာ့ဆွဲအား gravity အကြောင်းကို သိတယ် မဟုတ်လား’၊ ကျနော်ကလည်း “သိပါတယ် ကျောင်းနေတုန်းကလည်း သင်ရပါတယ်”လို့ ပြန်ဖြေလိုက်သည်၊
‘ခု တို့သွားမဲ့နေရာက ကမာ့္ဘဆွဲအား မမှန်တဲ့နေရာ၊ အဲဒီနေရာမှာ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားဟာ တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ကွ၊ ဗိုးတက်အ် Vortex စွမ်းအားတွေ သက်ရောက်နေတဲ့ နေရာပေါ့၊ တစ်ချို့ကလည်း ဘုရားသခင်က အထူးဖန်ဆင်းထားတဲ့နေရာ၊ ဒေသခံတွေကတော့ နတ်ဘုရားရဲ့ ကျိန်စာသင့်နေတဲ့နေရာ၊ တစ်ချို့ကတော့ ဂြိုလ်သားတွေ ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာ ဒီလိုပြောဆိုကြတယ်’၊ ကျနော်က နားမလည်ဘူးလို့ ပြောလိုက်သည်၊ ‘တကယ် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေ ရှိတဲ့နေရာပါ ရောက်ရင် မင်းသိသွားမှာပါ’ လို့ဆိုသည်။
Scotts Valley အလွန် တောင်တွေ ရက်ဝုဒ် Redwoods တောကြီးတွေ ဖြတ်ပြီးမှာတော့၊ ရက်ဝုဒ် တောအုပ်ထဲက တောင်ခြေတစ်နေရာတွင် Mystery Spot ကိုလှမ်းမြင်ရသည်၊ ကားကို ကားရပ်ကွင်း တွင် ရပ်ထားခဲ့ပြီး၊ ဧည့်သည်တွေ စာရင်းပေးရမည့်နေရာကို ထွက်ခဲ့ကြသည်၊ အလွန်လှပသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်လို့ မှတ်ချက်ချမိပါသည်၊ ယန်က ကြိုတင်လက်မှတ်ကို အွန်လိုင်းက ဝယ်ထားခဲ့သည်၊ မိနစ်၂၀လောက် လိုက်ပြမဲ့သူ guide ကိုစောင့်ရင်း၊ ပြခန်းတွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေ လိုက်ကြည့်ဖြစ်သည်၊ ကျနော်တို့နဲ့အတူ လာရောက်သော ဧည့်သည် ၁၅ယောက် ပြည့်မည်မထင်ပါ၊ ကျနော်တို့ရှေ့တွင် အယောက်၂၀ အုပ်စုတစ်စု ဝင်သွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဧည့်ကြိုဆောင်တွင် ကျနော်တို့အဖွဲ့ စုစုပေါင်း ၁၂ ယောက်ကို၊ ကျနော်တို့ကို လိုက်ပြမဲ့သူ guideက ဒီနေရာအကြောင်း ရှင်းပြပြီး သူလိုက်ပို့မဲ့ အစီအစဉ်လေးကိုပြောပြပါသည်၊ ၁၉၃၀ လောက်ထဲက ဒီနေရာလေး၏ သမိုင်းစခဲ့သည်ဆို၏၊ လှည့်ပတ်ကြည်ရှုချိန် အနည်းဆုံး ၄၅ မိနစ်ကြာမည်တဲ့၊ သူ့နာမည်က မိုက်ကယ်ဖြစ်သည် အသက်၂၅နှစ်လောက်ရှိမည်၊ ရီစရာတွေကို ပြောနေသော်လည်း တစ်ချို့ရီစရာမကောင်းပါ၊ အဖွဲ့တွင် ပါလာသော ကလေးသုံးယောက်ကတော့ ဘာပြောပြော လိုက်ရီနေကြပါသည်။
တကယ်တော့ တောင်နှစ်လုံးကြားက လျှိုလို့ခေါ်နိုင်သည့် နေရာက သစ်သားအိမ်ကလေးတစ်လုံးဆီသို့ သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ထိုအိမ်ကလေးရှိရာ ပေ ၁၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်သည် Mystery Spot ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါသည်၊ အိမ်လေးသို့ သွားရာလမ်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း မဖေါက်ထားပါ၊ ဇီဇက် အကွေ့အကောက် တွေလုပ်ထားပါသည်၊ ဘေးမှာ ရက်ဝုဒ် Redwoods နှင့် ယူကလစ် Eucalyptus ပင်တွေကြားမှာဖြစ်သည်၊ ပထမဦးစွာ မိုက်ကယ်က လယ်ဗယ်မီတာလေးနဲ့ ရေချိန်ညီကြောင်းပြသည်၊ ဒါပေမဲ့ လယ်ဗယ်မီတာတင်ထားသည် သစ်သားပြားကလေးက စောင်းနေသည်၊ ဒီနေရာတွင် သိလိုက်ရသည်မှာ စောင်းနေသည့်အရာများသည် အတည့်ဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကိုပင်၊ အမြင်အရ စောင်းနေသည်၊ လယ်ဗယ်မီတာလေးနဲ့ ချိန်လိုက်လျှင် အတည့်ဖြစ်နေသည်ကို ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပြီးနောက် ကျနော်တို့ သစ်သားအိမ်ကလေးဆီသို့ ထွက်လာခဲ့သည်၊ သစ်သားအိမ်ကလေးကို စောင်းပြီး ဆောက်ထားသည်၊ မိုက်ကယ်က တကယ်တော့ ဒါဟာတည့်တည့် ဆောက်ထားတာပါလို့ ပြောသည်၊ အိမ်ထဲကို ဝင်သွားသော အခါ မိုက်ကယ်က ကမ္ဘာဆွဲအားအကြောင်း အနည်းငယ်ရှင်းပြသည်၊ နယူတန်ကိုပင် ဟာသပြောလိုက်သေးသည်၊ သာမာန်အိမ်တွေမှာဆိုရင် အိမ်ဘားတန်းကို တွယ်ခိုစီးလိုက်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်သည် အောက်သို့ တည့်တည့်ဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်၊ ဒီမှာတော့ အိမ်ဘားတန်းကို တွယ်ခိုစီးလိုက်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်သည် တဘက်သို့စောင်းနေသည်၊ လာရောက်သူအားလုံးနီးပါး တွယ်ခိုစီးကြသည်၊ ဒီနောက်မှာတော့ အစောင်းတွေသည်အတည့် အတည့်တွေသည် အစောင်းဖြစ်နေသည့်အတွက် အိမ်နံရံများပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်လို့ ရကြောင်းပြသည်၊ အဲဒီလို စောင်းစောင်းရပ်နေကြတာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ကြသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် လူသည် တည့်တည့်မတ်မတ် လမ်းလျှောက်သွားသော်လည်း ဒီမှာ စောင်းစောင်းမတ်မတ် လမ်းလျှောက်သွားနေသလိုဖြစ်သည်။
တစ်နေရာရောက်သောအခါ ချိန်သီးကြီး တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ချိန်သီးတို့သည် လွှဲလိုက်လျှင် အလယ်ကနေ ဟိုဘက်ဒီဘက် တူညီစွာလွဲလေ့ရှိသည်၊ မိုက်ကယ်က ဒီချိန်သီးကြီးကိုကြည့်ဆိုပြီး လွှဲလိုက်သည်၊ ချိန်သီးကြီးသည် တစ်ဘက်ထဲသို့ တစ်ဘတ်သတ် လွှဲနေတော့သည်၊ လူတော်တော်များများ ‘အိုး’ ကနဲ့ ဖြစ်သွားကြသည်၊ ပြီးတော့ တစ်နေရာကို ခေါ်သွားပြန်သည်၊ မိုက်ကယ်က ဒီပျဉ်ပြားက စောင်းနေတယ် ဒါပေမဲ့သူက လယ်ဗယ်ညီနေတယ် ဆိုပြီး လယ်ဗယ်မီတာလေးနဲ့ ချိန်ပြသည်၊ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်က အပေါ်ကိုတက်ရတာနဲ့ အောက်ကိုဆင်းရတာ ဘာကွာသလဲ လာစမ်းကြည့်ကြပါ ဆိုသည်၊ လေးငါးယောက်လောက် စမ်းကြည့်ကြသည်၊ တစ်ချို့က ဘာမှာ မကွာဘူးပြောသည်၊ တစ်ချို့က အောက်ဆင်းရတာ အားစိုက်ရတယ်လို့ ပြောသည်၊ ကျနော်ကတော့ ဘာမှ မကွာဘူးလို့ထင်မိသည်၊ တကယ်ဆို အပေါ်တက်ရမှ အားစိုက်ရမည် မဟုတ်ပါလား။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်နောက်ပေါက်ကို ရောက်လာကြသည်၊ မိုက်ကယ်က မေးသည် 'ရေက ဘယ်လိုစီးဆင်းပါသလဲ' ကလေးတွေက မြင့်ရာက နိမ့်ရာကို စီးပါသည်လို့ ချက်ချင်းပင်ဖြေကြသည်၊
ဘာကြောင့်လဲလို့ ထပ်မေးတော့ ကမာ့္ဘဆွဲအားကြောင့်လို့ တော်တော်များများ ဖြေကြပါသည်၊
မိုက်ကယ်က ဒါဆို မင်းတို့ကို တစ်ခုပြစရာရှိတယ် ဆိုပြီး သစ်သားပြားကလေးကို ထုတ်လိုက်သည်၊ သစ်သားပြားကလေး၏ အလယ်တွင် အူလမ်းကြောင်းကလေးပါသည်၊ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုတွင် သစ်သားပြားကလေးကို ထောင်လိုက်သည်၊ အားလုံးသည် စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေကြသည်၊
မိုက်ကယ်သည် သူ့အိတ်ထဲက ဘေ့စ်ဘော ဘောလုံးလေးကို ထုတ်လိုက်သည်၊ ပြီးနောက် ဘောလုံးလေးကို သစ်သားပြားအပေါ်ကနေ အောက်ကိုလိမ့်ချလိုက်သည်၊ ဘောလုံးလေးသည် သစ်သားပြား အပေါ်ကနေအောက်ကို ဆင်းသွားပြီး တစ်နေရာရောက်သော ရပ်ကာ နောက်ကိုအရှိန်နဲ့ ပြန်လှည့်လာသည်၊ နောက်သစ်သားပြားပေါ်က ကျသွားသည်၊ လူတွေအားလုံး ‘အိုး’ ကနဲ့ ဖြစ်သွားပြန်သည်၊ ဒီမှာကြည့်ဆိုပြီး မိုက်ကယ်က ဘောလုံးလေးကိုကောက်ပြီး သစ်သားပြားအောက်ပိုင်းသို့ ချလိုက်ရာ ဘောလုံးလေးသည် သစ်သားပြားအပေါ်သို့ လိမ့်ပြီးတက်လာသည်၊ နောက်တစ်ခါ မိုက်ကယ်က ကျနော်တို့ဆီမှာ လိမ့်လိုရတာပါသလားမေးရာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့မိတ်ကပ်ဘူးလေးကို ထုတ်ပေးသည်၊ မိုက်ကယ်က မိတ်ကပ်ဘူးလေးကို သစ်သားပြားအောက်ပိုင်းသို့ ချလိုက်ရာ သစ်သားပြားအပေါ်သို့ လိမ့်ပြီးတက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်၊ အားလုံး ‘အိုး’ ကနဲ့ ဖြစ်သွားပြန်သည်။
ပြီးနောက် မိုက်ကယ်က ဘယ်သူ့မှာ ရေဘူးပါသလဲမေးရာ၊ ကလေးတစ်ယောက်က သူ့ရေဘူးကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်၊ မိုက်ကယ်က ငါရေတွေကို သွန်မှာနော်လို့ပြောတော့ ကလေးက ခေါင်းငြိမ့်သည်၊ မိုက်ကယ်သည် ရေဘူးထဲကရေတွေကို သစ်သားပြားအောက်ပိုင်း အူလမ်းကြောင်းလေးထဲသို့ ဖြေးဖြေးချင်း သွန်ချလိုက်သည်၊ ရေတို့သည် အူလမ်းကြောင်းလေးအတိုင်း သစ်သားပြားအောက်ပိုင်း ကနေ အပေါ်သို့ စီးလာသည် ပြီးနောက် အောက်သို့စီးကျကုန်သည်၊ အားလုံး ‘အိုး’ ကနဲ ဖြစ်သွားပြန်သည်၊ ကလေးတွေက လက်ခုပ်တီးကြသည်၊ မိုက်ကယ်က ကြည့် ရေက ဒီလိုစီးတယ်လို့ ပြောလိုက်သည်၊ ဒီနေရာတွင် သိလိုက်ရသည်မှာ အပေါ်သည် အောက်ဖြစ်နေပြီး၊ အောက်သည် အပေါ်ဖြစ်နေပါသည်။
ဒီနောက် မိုက်ကယ်သည် အိမ်နောက်ပေါက်နဲ့ သိပ်မကွာသည့် နေရာလေးကို ခေါ်သွားသည်၊ ဆင်ခြေလျှော တစ်ခုဖြစ်သည့် ပျဉ်ပြားကြီးတစ်ချပ်ကို စောင်းပြီးထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ မိုက်ကယ်က ဒီပျဉ်ပြားက စောင်းနေတယ် ဒါပေမဲ့ ပျဉ်ပြားရဲ့ အောက်ပိုင်းက မြင့်တယ်၊ အထက်ပိုင်းကနိမ့်နေတာ ဆိုပြီး လယ်ဗယ်မီတာလေးနဲ့ ချိန်ပြသည်၊ ပြီးနောက် ကျနော်တို့ထဲက အရပ်ပုသူတစ်ယောက်နဲ့ အရပ်မြင့်သူတစ်ယောက်ကို ခေါ်ထုတ်ပြီး တဘက်စီမှာ ရပ်ခိုင်းသည်၊ ပြီးတော့ဘက်ပြောင်းပြီး အရပ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြသည်၊ အရပ်ပုသူသည် အနိမ့်ကိုဆင်းသွားသောအခါ အရပ်မြင့်သွားပြီး၊ အရပ်မြင့်သူသည် အမြင့်ကိုတက်သွားသောအခါ အရပ်နိမ့်သွားကြောင်းပြလိုက်သည်၊ ဒီနေရာတွင် သိလိုက်ရသည်မှာ အရွယ်တူနေပါစေ အမြင့်မှာရပ်နေသောသူသည် အရပ်နိမ့်ပြီး၊ အနိမ့်မှာ ရပ်နေသာသူသည် အရပ်မြင့်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်။
မိုက်ကယ်က ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ အချိန်ငါးမိနစ်ပေးကာ အစီအစဉ်ကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်၊ တစ်ယောက်စီကို ကားကြော်ငြာစတစ်ကာ bumper sticker တစ်ခုစီလက်ဆောင်ပေးပါသည်၊ အမေရိကန် ထုံးစံအတိုင်း လိုက်ပြသူ guideကို တစ်ပ် လက်ဖက်ရည်ဖိုး ပေးရပါသည်၊ ငါးဒေါ်လာပေးလိုက်ရတာ တန်သည်ဟု ထင်မိပါသည်၊ မပြန်ခင် ကျနော်တို့ တောင်ပေါ်တက်၍ ရှုခင်းတွေ ကြည့်ခဲ့ကြပါသေးသည်၊ လမ်းတွင် ယန်က ဘယ်လိုလဲ မင်းစိတ်ဝင်စားလားလို့ မေးသည်၊ ကျနော်က ကျနော့်အတွက် အထူးအဆန်းတွေပါပဲ ဒီနေရာမှာ ကမာ့္ဘဆွဲအား ဖြစ်ပျက်နေတာ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်လို့ ပြောလိုက်သည်၊ ယန်က ဒါကို လူတွေက optical illusion လှည့်စားထားတာလို့ ပြောတယ်၊ မျက်လှည့်လိုပေါ့၊ gravity ကိုနားလည်တဲ့သူတွေက အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်တွေပေါင်းပြီး လှည့်စားခဲ့တာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ အထူးအဆန်းကတော့ သံလိုက်အား သက်ရောက်မှုကြောင့် သံလိုက်အိမ်မြှောင်တွေ မီတာတွေ အလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့၊ ယန်ပြောပြတော့ ကျနော် အံ့သြသွားမိသည်၊ ထူးခြားတဲ့ အချက်ကလေးတစ်ချက်နဲ့ အထူးအဆန်းကြီးဖြစ်အောင် လူတွေဖန်တီးတတ်ကြပါလားလို့ စဉ်းစားမိလိုက်သည်။
နောက်နေ့တွင် ကျနော် ယန်နှင့် ဘေးလ်တို့ ကော်ဖီဆိုင် အတူတူထိုင် ဖြစ်ကြသည်၊ ကျနော်က ယန်ကို မနေ့က ထူးဆန်းတဲ့နေရာ Mystery Spot လိုက်ပို့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်သည်၊ ဘေးလ်က ‘ဘာထူးဆန်းတဲ့နေရာလည်း အဲဒါ လူလိမ်တွေ ညာနေတဲ့နေရာ၊ မင်း သူကို ခေါ်မသွားသင့်ဘူး’၊
ယန်ကလည်း ‘ဘာမို့လဲ၊ အဲဒီနေရာက ပညာရပ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့နေရာကွ အားလုံးမှ ဒေါ်လာ ၅၀ လောက်ပဲကုန်တာ’
ဘေးလ်က ‘အဲဒါပေါ့ မင်းတို့က တစ်ယောက်ကို ငါးဒေါ်လာ ဆယ်ဒေါ်လာနဲ့ ဒီလိုပဲ လုပ်စားတဲ့သူတွေ ကြီးပွားသွားတာ၊ ဘုရားသခင်ကလိုလို ဂြိုလ်သားကလိုလို သတင်းလွှင့်သေးတယ်’၊
ယန် ကလည်းမခံ ‘ဒါက ဟိုး အတိတ်ကပါကွာ၊ ခုသူတို့က ဒီလိုမပြောတော့ပါဘူး’၊
ဘေးလ်ကလည်း ‘အေးပေါ့ကွာ မင်းတို့လိုလူတွေရှိလို့ လုပ်စားတဲ့သူတွေရှိတာ’၊
‘မင်းငါ့ကို ဒီလိုမပြောနဲ့’ ယန်ကပြန်ပြောသည်၊
ကျနော်က အခြေအနေကြီးထွားလာမည် စိုး၍၊ ကြားက မင်းတို့ ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့လို့ ဝင်တောင်းပန်လိုက်သည်၊
ဘေးလ်ရော ယန်ရော ‘ငါတို့ ရန်ဖြစ်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး အငြင်းပွားနေကြတာပါ’၊ ‘ငါတို့ရဲ့ သဘောထား ကွဲလွဲမှုအတွက် အငြင်းပွားနေကြတာပါ၊ ငါတို့ ဘယ်တော့မှာ ရန်မဖြစ်ဘူး’ စသဖြင့် ကျနော်ကို ပြန်ပြောကြသည်၊
ယန်က ‘ငါတို့က အငြင်းပွားနေကြကွ၊ ဒါမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှာ၊ သူဘယ်လိုမြင်လည်း ကိုယ်ဘယ်လိုမြင်သလဲပေါ့၊ မင်းကြည့်လေ ဘေးလ်ပြောတာလည်း မမှားဘူး ကယ်လီဖိုးနီးယားက စလိုက်တဲ့ ဒီ Mystery Spot ဟာ၊ အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာ အများကြီးဖြစ်နေပြီ မလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုပေါ့’၊
ဘေးလ်က ‘အဲဒါကို လုပ်စားတာလို့ခေါ်တာ’၊
ယန်က တစ်ဖန် ‘လုပ်စားတယ်လို့ပဲဆိုဆို ညာတာပဲဆိုဆို ငါတို့အမေရိကန်တွေ နှစ်သက်ကြတယ် fun ပေါ့’၊
ဘေးလ်ကလည်း ‘ဒါကြောင့်လည်း လိမ်မှန်းသိလျှက်နဲ့ တစ်ချို့က အလိမ်ခံဖို့သွားကြတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ဒေးဗစ်ကောဖါဖီးလ်လည်း ချမ်းသာသွားတယ်၊ လူတွေရဲ့ အကြိုက်ကို သိရင် လုပ်စားရလွယ်ပါတယ်’၊ ဘေးလ်ကဆက်၍ ‘နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတော့ တစ်ခါတစ်လေ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တယ် ဆိုတာတွေ ယုံရခက် မယုံရခက်ပေါ့’
‘အေးလေ နည်းပညာနဲ့ လူတွေကို ဘယ်လိုလှည့်စားတယ်ဆိုတာ မင်းသွားကြည့်သင့်တာပေါ့ ’၊ ဆိုတော့သည်၊
ကျနော်အတွက်တော့ သူတို့ရဲ့ ပွင့်လင်းသော သဘောထားကွဲလွဲမှုကို သိလိုက်ရသည်။
ကျနော်ကတော့ သွားကြည့်ပြီးမှ ဒီ Mystery Spot အကြောင်းလေ့လာဖြစ်သည်၊ Mystery Spots များသည် ဖန်တီးထားသော illusion များ ဖြစ်သည်ကို အများကသိကြပါသည်၊ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖေါ်ထုတ်သူများလည်း ရှိပါသည်၊ ဒါပေမဲ့ လူတွေသွားရောက် လည်ပတ်ကြပါသည်၊ ဘယ်သူကမှ မင်းတို့ညာနေတယ်လို့် လာရန်တွေ့သူမရှိ၊ ကြိုက်သူသွား၍ မကြိုက်တဲ့သူ မသွားပဲနေနိုင်သည်၊ ကိုယ်နှစ်သက်ရင် ကိုယ်သွားမယ် ကိုယ်မနှစ်သက်ရင် ကိုယ်မသွားနဲ့ပေါ့၊ မကြိုက်တဲ့သူများက သွားရောက်တဲ့သူများကို ရန်မလုပ် မဆဲဆိုပါ၊ သွားတဲ့သူများကလည်း မကြိုက်၍ မသွားတဲ့သူများကို ဘာမှမပြော၊ ပွင့်လင်းသော လူအဖွဲ့အစည်း၏ အားသာချက်ကို တွေ့လိုက်ရသည်၊ ကိုယ်မကြိုက်၍ သူများပါ မကြိုက်ရဘူးဆိုသော ကိုယ်မသွား၍ သူများပါ မသွားရဘူးဆိုသော စိတ်ထားရှိသူများ အတော်နည်းပါးပါသည်၊ နောက်ဆုံး ယုံလား မယုံးဘူးလား ဆိုတာ အဓိကမကျ၊ ထိုသွားသောအချိန်လေးမှာ စိတ်ပျော်ရွင်မှု ရသွားခြင်းသည် တန်ဖိုးဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်၊ တစ်ချို့က
‘I didn't even care that "it'sascam," "not real," "optical illusion," etc. Stop trying to ruin it for the people who actually enjoyed it. This was so friggin interesting, mind boggling, scratch your head type fun!’ ဆိုသည်၊
အများအားဖြင့် ‘ဒါကို ငါတို့သိပါတယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိုလာရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်’ လို့ဆိုကြသည်၊
‘fun’ ကိုသိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ ‘funny’ ဖြစ်သည်ဆိုသည့် အမေရိကန်တွေကို ချီးကျူးမိပါသည်။
ကျနော် မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး Mystery Spots တွေဖွင့်ပြီး ဒီနည်းပညာကိုပြစားရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားမိသည်၊ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တွေးလိုက်မိသည်၊ ဒီအချိန်မှာ အဲဒီလို ကျနော်ပြစားလျှင် တော်ကြာ လူလိမ်လူညာ တွေပါလို့ မီဒီယာတွေကရေး၊ လုပ်စားတဲ့ သူတွေပါဆိုပြီး လူစုလူအုပ်ကြီးက ဆန္ဒတွေပြ၊ ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့၊ ဆန့်ကျင့်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်၊ နောက်ဆုံး လူလိမ်လူညာ တွေပါလို့ ဆိုပြီး လူစုလူအုပ်ကြီးရောက်လာ ဝင်ဖျက်ဆီး၊ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်ရဲ့Mystery Spots တွေ ပျောက်သွားရပါလိမ့်မည်၊ ဒါက ကျနော်ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ချို့သည် ထိုသို့ လုပ်ရသည်ကို အဟုတ်ကြီးထင်နေတတ်ပါသည်၊ သူတို့ အဟုတ်ကြီးထင်သည့် အရာများသည် ဘာမှမဟုတ်သည့် အရာများ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
မကြာမှီ အချိန်မှာပေါ့ လူတစ်ချို့သည် နားလည်သင့်သည်တို့ကို နားလည်သွားခဲ့ကြလျှင် ကျနော် Mystery Spots တွေ ဖွင့်ပြီးပြဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပထမ ရည်မှန်းချက် အမြန်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်မိပါသည်။
Posted by sosegado at 10/04/2012 11:33:00 AM 12 comments Links to this post
ယုံလား မယုံဘူးလား အမေရိကန်များ နှင့် Mystery Spots...